Iran oo sheegtay inaan wax dagaal ahi ka dhici doonin gobolka | Goojacade
Home War Iran oo sheegtay inaan wax dagaal ahi ka dhici doonin gobolka
Iran oo sheegtay inaan wax dagaal ahi ka dhici doonin gobolka
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa uu sheegay in uusan rumaysnayn in dagaal uu ka qarxi doono gobolka xilli uu jiro walaac laga qabo xiisadaha sii kordhaya ee dalkiisa uu kala dhaxeeyo waddanka Mareykanka.
Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu warbaahinta qaranka dalkiisa ee IRNA uu u sheegay in Tahraan aanay dagaal doonayna, uusanna jirin dal “ku fakaraya inuu Iiraan dagaal kaga hortago”.
Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu maraakiib iyo diyaarado dagaal uu geeyay Gacanka taas oo lagu tilmaamay in looga gol-leeyahay “halista” Iiraan.
Hasayeeshee Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado wixii colaad keeni kara.
Isagoo la hadlayay IRNA markii uu soo gebagabeeyay booqasho uu ku tegay Shiinaha maalintii Sabtidii ayuu Mr Zarif waxa uu sheegay in Mr Trump “uusan dagaal doonayn, hasayeeshee dadka ku xeeran ay ku riixayaan dagaalka iyagoo isticmaalaya oraahda ah Mareykanka aannu ka dhigno mid ka awood badan Iiraan”.
Waxa uu intaasi ku daray: “Wax dagaal ah ma uu jiri doono sababtoo ah innagu dagaal ma doonayno qof maanka ku hayana ma uu jiro fikradda ah in colaad lagala hortago Iiraan.”
Maxay xiisaduhu u jiraan?
Digniino ka dhan ah duulimaadyada iyo maraakiibta:
Xilli hogaamiyayaasha labada dal ay ku adkaysanayaan in aanay dagaal doonayn ayaa haddana xiisadaha ka taagan Gacanka ay weli yihiin kuwo sarreeya.
Diblumaasiyiinta Mareykanka ayaa Sabtidii ka digay in diyaaradaha ganacsiga ee halkaasi maraya ay halis ugu jiraan in si khalad ah loo aqoonsado.
Previous articleWargeyska Standard: Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo lagu xusay fadeexad ku saabsan dahab been abuur ah
Next articleSAWIRO: 18 MAY XUSKII UGU WEYNAA EE UGU NABADGELYADA BADNAA OO LAASCAANOOD KA DHACAY